Isilo-qabane esithambileyo esinobuhlobo be-A-isakhelo esimiswe kwi-Jay Range ngembono ye-Whiteface Mountain. Indlu inegumbi lokuhlala, indawo yomlilo, igumbi lokulala eliphezulu kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Ngemisebenzi engapheliyo yokukhetha kuyo, sifumaneka nje imizuzu eli-10 ukusuka kwiNtaba yeWhiteface kunye nemizuzu engama-20 ukusuka eLake Placid.
I-A-frame epholileyo, ehambelana nezilwanyana ezifuywayo ebekwe kwiJay Range enombono weNtaba iWhiteface. Ibekwe kwiihektare zabucala ezingama-30, unokufumana umthambo wokuhamba nje unyuka ngendlela.
Indlu inegumbi lokuhlala, indawo yomlilo, igumbi lokulala eliphezulu, elifikelelekayo ngezinyuko ezijikelezayo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho i-queen sleeper sofa kunye nebhedi yemini kwigumbi lokuhlala. Ungonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye i-BBQ yangokuhlwa kwindawo ebanzi.
Kukho imisebenzi engenasiphelo ongakhetha kuyo. Sifumaneka nje 10 imizuzu ukusuka Whiteface Mountain, 20 imizuzu ukusuka Lake Placid kunye 30 imizuzu ukusuka Lake Champlain. ILake Placid yidolophu ebukekayo yeAlpine enokutya okulungileyo, ivenkile kwaye izele yimbali yeOlimpiki. Nqakraza kwiFerry ukusuka ePlattsburg ekufutshane (iikhilomitha ezingama-35) kwaye ungafumana isidlo sasemini eBurlington kungekudala. Sikwabekwe imizuzu engama-90 ukusuka eMontreal, eyenza uhambo oluhle losuku.
Ukuba kukunyuka intaba oyilandelayo, ukwindawo elungileyo. Simi kumda osempuma weNcopho eziPhakamileyo ezineeNcopho ezingama-46 ngaphezulu kweenyawo ezingama-4000. Yenye yezona ndawo zibalaseleyo kuyo yonke iAdirondacks.
4.96 · Izimvo eziyi-485
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi485
I-A-frame ibekwe kwindlela yentaba yabucala kuluhlu lweJay kunye namakhaya ambalwa abekwe endleleni. Indlela ilinywa rhoqo ebusika kunye nendlela yam yokuqhuba. Unganyuka ujikeleze i-A-frame kwaye unyuke indlela yentaba.
Ubuncinci, kuphela njengoko kufuneka. Umphathi wepropathi unokufumaneka njengoko kufuneka.